Shir lagaga hadlayay nidaaminta basaska dadweynaha oo lagu qabtay xarunta D/Hoose | FooreNews
Home wararka Shir lagaga hadlayay nidaaminta basaska dadweynaha oo lagu qabtay xarunta D/Hoose
Shir lagaga hadlayay nidaaminta basaska dadweynaha oo lagu qabtay xarunta D/Hoose
fooreMar 20, 2012wararka0
Hargeysa (Foore)- Shir lagaga hadlayay nidaaminta Gaadiidka basaska ayaa maanta lagu qabtay Xarunta Dawlada Hoose ee Caasimada Hargaysa, kaas oo lagu gorfeeyay sidii kor loogu qaadi lahaa Bilicda Caasimada.
Shirkan oo ay ka soo qebgaleen xoghayaha fulinta dawladda haoose Mawliid Waris Cabdilaahi, xildhibaan Ismaacil Cabdi Cigge (Caymis), xildhibaan khadar Axmed Like iyo agaasimaha cashuuraha Rabiile Cumar Aw Cabdi, ayaa waxay ku sheegeen in la bilaabay maanta diwaan galinta basaska, kuwaasi oo loo samaynayo nidaam ay ku shaqeynayaan, isla markaana la yareeyo cidhiidhiga ay suuqa ku hayaan.
Xoghayaha fulinta dawladda Hoose Mawliid Waris Cabdilaahi oo ka hadlay shirkan ayaa u soo jeediyay basaska dadweynaha inay dawladda Hoose kala shaqeeyaan nidaaminta basaska ka dhex shaqeeya magaaladda Hargeysa.
Waxa kale oo uu ugu baaqay shirkadaha isgaadhsiinta iyo laydhka inay xadhkahooda ka basriyaan oo ay kor uga qaadaan shaaricyada magaaladda. Waxaanu tilmaamay inay talaabo ka qaadi doonaan shirkadaha aan la jaan qaadin qorshaha dawladda Hoose ee wax ka qabashadda bilicda caasimadda.
Xoghayuhu wuxuu u qabtay shirkadaha isgaadhsiinta iyo kuwa laydhka inay muddo sadex maalmood ah ku habeeyaan xadhkahooda waddooyinka soo galay ee magaaladda Hargeysa
Dawladda hoose ee Hargeysa ayaa wali waxa ay ku guda jirtaa hawlgalkii lagu nidaaminayey suuqa Caasimada si loo soo celiyo bilicdii Caasimada Hargaysa.
Previous PostWadani oo Burco ugu quus-gooyay 14-ka urur ee la tartamaya iyo Hoggaamiyahooda oo ku is-tareexay Next PostWasiirka cusub ee warfaafinta oo xilkii la wareegay iyo xamaasaddii khudbadihii Masuuliyiinta